Ko munondo unorevei muruoko rwemwarikadzi Themis? Femi # 769; hongu, Themis (chiGiriki: #920; #941; #956; #953; #962;) mwarikadzi wekururamisira, Titanide, wechipiri wechirume weZeus ...
Ndeapi mapuroti ane zvindori kunze kweSaturn? muPuto Munzvimbo dzose dzegasi giants mudenga (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune). (Ndizvo chete kuti Saturn ine huru uye yakaonekwa) hongu ikozvino ...
Chii chinonzi "Storosovaya Dubina" chinorevei? Inenge idiot Dubin stoorosovaya (nyore) - pamusoro pebenzi benzi, benzi, benzi, boob. Pane maBhaibheri maviri ezvakabva mumashoko okuti: 1) nheyo yemashoko ndeyekufananidzira ...
Sei chikamu chiratidzo chepamutemo chezororo cheKaturike Halloween? [Email akadzivirira] Hi! Zvakanaka, kwete murau chiratidzo chekukosha cheHalloween - mutsipa musoro. Iko mukati mekatsva kubviswa, chiso chinotemwa ndokuiswa mukati ...
Tsanangura, ndapota, chii chinonzi injector? kazhinji, iyo ipulveler))) ... Zvakanaka, shoko))) Vanhu vakangwara vakanyora nguva ipi! Zvakanaka, ndichawedzera. Izwi rinowanzoti "injector" rinoreva huwandu hwemagetsi emagetsi mumotokari.
Ndechipi musiyano pakati pe shuga yakanatswa uye shuga isina kuwanikwa? ))) shuga yakanatswa iri mumwero we cube) uye isina kufananidzwa sejecha) hapana shuga yakanatswa, yakanatswa bhotela! uye shuga yakanatswa, mumakubhi, uye jecha risingagadziri ...
Ko Adhamu muti unoita sei? Nei ichitumidzwa kudaro? Paulownia kana muti waAdam (Paulownia) ndiwo mhando yemichero yemhuri yezinyoni (dzimwe nguva inonzi mhuri yeBignonium). Maruva ...
Ndiani akawana nguva uye sei Troy? Schliemann Heinrich. Inenge mugore re 1870. Tarisa mabhuku pamusoro pake, munhu anofadza zvikuru, akazvidzidzisa. Akazvarwa uye akapedza nguva yakawanda yehupenyu hwake muSt. Petersburg. The famous ...
Ndivanaani rakatanga kugadzirwa kweBallet muRussia? Ainzi chii? Ballet muRussia, sekuEurope, yakatanga senyanzvi yematare panguva yekutonga kwaTsar Alexei Mikhailovich. Bhallet yekutanga yeRussia inofungidzirwa ...
Ndapota, ndiudzei shoko rokuti "oglu" rinorevei pakuguma kwemazita evanhu vanogara kuMabvazuva? mwanakomana! inoti mwana wake ndiani uye ndiye baba! Kana ndisina kukanganisa, inogadzirisa hutano ...
Chii chakaitwa nemauto eSSS SS muHitlerite Army uye akasiyana sei ne Wehrmacht? Masoja eSS uye sangano re SS pachavo hazvisi zvakafanana. Sangano re SS riri ...
Ndivanaani vaPolvota? kubva munhoroondo yekare? By # 769; (. On zvikuru fungidzira Mabviro ezwi yekare Russian polov zhlty, kukwana yeyero-haired yellow-ganda ;. Kimaks, Kipchaks, Cumans) catchers Turkic anongofamba vanhu, zvichiguma VIII remakore ari ...
Ndiudze, panguva ipi inosvika pamba paunopedzisa chibvumirano chekupa imba - Pachisayina, kana kana zuva rekushanda kweClass Code rinotaurwa mune chimwe chezvikamu zvechibvumirano ...
Iko hovha 8 March? ssyasyach AlekseyDWKH akatoti zvinhu zvose, uye pano haungagoni kuwedzera chero chinhu .. Zororo iri rakasimuka sezuva rekurwa kwekodzero dzevakadzi. 8 March 1857 gore mugore ...
Mibvunzo ye102 mu database yakagadzirwa mu 1,079 masekondi.